ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ဘတ်ဂျက် Making | USAHello | USAHello
တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်သငျသညျလစဉ်လတိုင်းရှိသည်နှင့်သင်ငှားပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ငွေဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံတစ်ဦးခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်, utilities, အစာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အဝတ်အစား, စသည်တို့ကို. ဒါဟာသင်ပိုက်ဆံထဲကအပြေးခြင်းမရှိဘဲသုံးဖြုန်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုတွက်ကူညီကြမည်. ထို့အပြင်ဘတ်ဂျက်ရှိခြင်းကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပိုက်ဆံကယ်ဖို့စေသည်.
ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို, Harsha KR နေဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်, Creative Commons
ဘတ်ဂျက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ပိုက်ဆံထိန်းချုပ်တာကိုဆိုလိုတယ်. သင်တစ်ဦးကန့်သတ်ဝင်ငွေပေါ်ကျရှငျနကွေပါလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. USA တွင်, သူတို့ဝင်ငွေထက်ပိုသုံးဖြုန်းဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးများစွာသောလူငွေနှင့်ဒုက္ခသို့ရ.
သင့်ရဲ့လစာန်းကျင်ကသင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုဖန်တီးပါ. သငျသညျအပတ်စဉ်ပေးဆောင်နေကြ, တိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်း, လစဉ်သို့မဟုတ်သင်? သင့်ရဲ့လစာကာလတဝိုက်ကသင်၏ဘတ်ဂျက်ကို Make.
လစဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များစာရင်းကို Make: အစာ, utilities, ငှားရန်, ဥပမာဘတ်စ်ကားယာဉ်စီးခသို့မဟုတ်ကားချေးငွေ
သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်သည်အခြားကုန်ကျစရိတ်များစာရင်းကို Make: အာမခံ, ပြုပြင်ဥပဒေကြမ်းများ, ကျောင်းကကုန်ကျစရိတ်
သင်တို့အပေါ်မှာဖြုန်းချင်ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်အခြားအရာများအတွက်တစ်ဦးငွေပမာဏကို Add. ဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတို့ကိုမပြုမီသင်လိုအပ်သောအရာတို့ကိုဝယ်ယူရန်ပညာရှိဖြစ်၏ရုံသတိရ!
သင့်ရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုသင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းမပါဘူးဆိုရင်, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်မျှမျှတတမဖြစ်. သင်သည်သင်၏ဝင်ငွေတိုးမပေးနိုင်လျှင်, သင်ဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ခုတ်လှဲရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
ပိုက်ဆံ Save နှင့်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်
သင်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်ပြီးနောက်ကျော် left အချို့ပိုက်ဆံရှိပါက, ချွေတာစတင်ရန်! ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်သင်၏ငွေစုအကောင့်ထဲသို့ချပြီးအားဖြင့်ဖြစ်တယ်. သငျသညျအရေးပေါ်ရှိပါကသင်သည်သင်၏ငွေစုကိုသုံးနိုင်သည်. ကျွမ်းကျင်သူများသင်ခြောက်လညီမျှအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖန်တီးအကြံပြု’ သင်သည်သင်၏အလုပ်ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသူရသည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်. သငျသညျအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတက်ဆောက်ပြီးနောက်, ထို့နောက်သငျသညျအရာတစ်ခုခုပျော်စရာလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ, ကဲ့သို့သင်၏မိသားစုနှင့်အတူတစ်အားလပ်ရက်အပေါ် go သို့မဟုတ်အထူးတစ်ခုခုဝယ်ဖို့.
သင်သည်မည်သည့်လနှောင်းပိုင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများအပေါငျးတို့သဆပ်ဖို့သေချာပါစေ. သင်တဦးတည်း box ထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းမည်သို့သင့်ရဲ့အရေးကြီးသောလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်မှတ်တမ်းများအားလုံးသိမ်းဆည်းထားပါ, အံဆွဲသို့မဟုတ်ဖိုင်.
ခရက်ဒစ်ဘဏ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စုထံမှပိုက်ဆံချေးနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်ပေးဆောင်ဆိုလိုတယ်. သငျသညျခရက်ဒစ်သုံးပြီးပိုက်ဆံချေးတဲ့အခါမှာ, သငျသညျအတိုးဆပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, ပိုက်ဆံချေးဘို့ဒါမှမဟုတ်အခကြေးငွေ.
သင်သည်သင်၏အကြွေးကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများအပေါငျးတို့သပေးဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတစျနေ့တအိမ်ဝယ်ဖို့လိုလျှင်, သငျသညျအကြွေးသုံးစွဲဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို.
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ရရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျလုံးဝလတိုင်းသည်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ရန်အလွန်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ခရက်ဒစ်ကတ်များအထောက်အကူဖြစ်ပေမယ့်မကြာခဏသင်လစဉ်လတိုင်းသူတို့ကိုပယ်ပေးဆောင်ကြဘူးလျှင်သင်အလွန်မြင့်မားအကျိုးစီးပွားအားသွင်းနိုင်ပါတယ်. သင်ရှိသည်ထက်ပိုပြီးပိုက်ဆံမဖြုန်းပါနဲ့!
သင်မသိသောလူများပိုက်ဆံပေးခြင်းခံရတဲ့အခါသတိထားပါ, သငျသညျငွေသားနှင့်အတူပေးဆောင်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျစစ်ဆေးမှုများအားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်ပြီးထို့နောက်သင်သည်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်၏အထောက်အထားရှိသည်ဒါကြောင့်ဘဏ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စုမှာစစ်ဆေးနေအကောင့်ရဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျငွေသားပေးချေရန်ရှိပါက, သငျသညျငွေပေးချေမှုအထောက်အထားရှိသည်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းလက်ခံရရှိတောင်း.
အချို့သော Scan ကိုရှိပါတယ် (ကလူခိုးလှည့်ကွက်) ဒီတိုင်းပြည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီးသေးကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူးသောပစ်မှတ်ကလူ. သင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးအနိုင်ရကြောင်းငွေအများကြီးပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ်ပြောပါတယ်ကြောင်းမေးလ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ် get အကယ်., ကလိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အတုဖြစ်စေခြင်းငှါ,. စာတိုက်နှင့်အတူ Check, သင့်ရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်း / ဆရာ, တစ်ခုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းသင်မသေချာလျှင်.
သငျသညျကိုဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေးဆောင်, စာအရေးအသားအတွက်သဘောတူညီချက်အဘို့အမေးရန်လက်ခံနိုင်ဖွယ်က, သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်စကားပြောသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပြော. အကြံဉာဏ်တောင်းရန်စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်အချိန်မပါဘဲပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့ဖိအားပေးခံရမခံစားရဘူး.
USA တွင်, လူတိုင်းဧပြီလအားဖြင့်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်ပါသည် 15 သူတို့ရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့မည်မျှဝင်ငွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း. အဲဒီအစီရင်ခံစာဟာအခွန်ပြန်လာဟုခေါ်သည်. သင်သည်ထိုဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကြွေးစေခြင်းငှါ. အခွန်သင်လက်ခံရရှိအများပြည်သူန်ဆောင်မှုများအတွက်အစိုးရပေးဆောင်ကြောင်းပိုက်ဆံများမှာ, သင့်ရဲ့ကလေးများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရန်အဘို့အကျောင်းမှာတူသော. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ အခွန်နှင့်မည်သို့အခွန်ပေးဆောင်ဖို့အကြောင်းပိုမို. သငျသညျလုပ်ငွေဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်., သို့သော်, သင်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိစေခြင်းငှါ, (နောက်ကျောကအစိုးရအနေဖြင့်ပိုက်ဆံ) အခွန်ပေါ်တွင်သင်ပြီးသားယခုနှစ်ကာလအတွင်း paid.
သင်တစ်ဦးလစာလက်ခံရရှိသည့်အခါ, အချို့ပိုက်ဆံအချို့အခွန်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကထဲကယူပါလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သည်သင်၏ကိုယ်စားအစိုးရမှပေးရန်သင့်လစာမှအချို့သောပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်မည်. ဤသည်အခွန်ကိုသိုထားသောကိုခေါ်. ဤသည်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်အခွန်ပါဝင်သည်, အလုပ်လက်မဲ့အာမခံများနှင့်လူမှုလုံခြုံရေး, အငြိမ်းစားသို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းများအတွက်ငွေစုထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ဒါကဝဲလ်တဖက်ကနေနမူနာလစာဖြစ်ပါသည် “ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်လက်စွဲ” အစီအစဉ်.
Khan Academy နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ